Burcad Badeed Soomaali Ah Oo Ku Fashilmay Qabsashada Markab Laga Leeyahay Liberia
Markab dagaal oo laga leeyahay dalka india oo lagu magacaabo Navy Patrol vessel Sharda ayaa waxa uu badbaadiyey markab xamuul kaa oo uu ka dul babanaayey calanka laberia markabkaasi lagu magacaabo mountbatten, kaasi oo ay isku dayeen in ay weerar ku qaadan burcad badeed soomaaliyeed.
Markabkaan ayaa waxa uu ku socdaalayey meeel u jirto biyaha Soomaliya 150 nm,waxuuna xilaagaasi ku jiray howlahiisa caadiga ah, waxaana kusoo dhawaaday doonyo labo ay ku sheegeen oo aad u hubeesan, durbadiina waxay wacdeen oo ay caawimaad weydiisteen markabka india laga leeyahay oo markii dambe usoo gurmaday.
Markabka weerarka lagu qaaday ee mountbatten ayaa waxa uu jiray 30 nm markabka dagaalka ee india laga leeyahay xiliga weerarka lagu qaaday, markabkaan dagaal ayaa markuu goobta soo gaaray waxaa uu markabka gurmadka weydiiste u diray diyaarad helicopter ah oo u kuur gasha xaalada shaqaalaha markabkaasi.
Ugu dambeyntiina waxaa suurta gashay in kooxahii burcad badeeda soomaalida ay iskaga cararaan goobtaasi markii ay dareemeen in markab dagaal uu kusoo wajahanyahay ayna u babac dhigi Karin, markabka india laga leeyahay ayaa howl galiyey ciidamo gaar ah kuwaasi oo ku raad jooga burcad badeeda soomaalida, inkastoo aan laga war heyn in ay u suurto gashay in ay gacanta kusoo dhigaan burcad badeedaa soomaalida ah.
Shantii sano ee u dambeeyay waxaa yaraday dhaqdhaqaaqa burcad badeeda soomaaliyeed inkastoo sanadkaan gudahiisa la diiwaan geliyey falal dhowr ah oo ka dhan ah burcad badeeda soomaaliyeed iyagoo sameeyay isku dayo dhowr ah oo ay ku doonaayeen qafaalashada maraakiibta.